Ulwimi oluNcedisayo +: yongeza ulwimi lweSpanish ku-Siri kwi-iPhone 4S yakho nge-iOS 5 (Cydia) | IPhone iindaba
Ulwimi oluNcedisayo +: yongeza ulwimi lweSpanish ku-Siri kwi-iPhone 4S yakho nge-iOS 5 (Cydia)
UGonzalo R. | | Cydia, iOS 5
Olu lutshintsho oluninzi Besilindile ukubanakho ukuqhubeka nokubamba kwi-iOS 5.1.1 nge-jailbreak engafakwanga, ukuba kukho into elahlekileyo kwiindaba ze-iOS 6 kunjalo kunjalo Siri ngesiSpanish (Akukho mntu uya kufuna ukuhlaziya iimephu ...).
Con ULwimi oluNcedisayo + unako yongeza iilwimi ezintsha zeSiri, kubandakanya Spanish, kwi-iPhone yakho eyaphukileyo kunye iOS 5. Kuya kufuneka ufake olu hlengahlengiso kwaye kuya kuba ngokungathi une-iOS 6 yeSiri, ilula. Isixhobo siyasebenza yiyalela kwikhibhodi yaseSpain.
Ungayikhuphela nge $ 0.99 kwiCydia, uyakuyifumana kwiBigBoss repo. Kuya kufuneka uyenzile jailbreak kwisixhobo sakho.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Vula imephu ze-iOS6
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » Cydia » Ulwimi oluNcedisayo +: yongeza ulwimi lweSpanish ku-Siri kwi-iPhone 4S yakho nge-iOS 5 (Cydia)
Izimvo ezi-40, shiya ezakho
Tomaaaaa ngoku ukuba !!!!!
INYANISO ABANOKWENZA UKUBA BACACISE NGALINYE INDLELA EFANELEKILEYO
Umcimbi wolwakhiwo lwendawo, ngokubanzi, awuhambi, okanye ubuncinci ami, oko kukuthi yimfihlo engaphelelanga, ndiyifakile kumncedisi + ukuyibeka ngeSpanish. Ndenze nenkqubo yokusebenza yokukhohlisa, kodwa ayisebenzi kum.
Andiyifumani, yeyiphi i-repo?
Andiyifumani nayo kwaye ndinayo i-BigBoss repo ...
Layisha kwakhona iiphakheji
Uxolo ngokungazi, kodwa zenziwa njani iiphakheji kwakhona?
Ndizamile ukuphinda ndilayishe iipakeji kwaye akukho nto konke konke, ukucima kwakhona i-Bigboss repo kwaye ndiyibuyisele kwi-Cydia, kodwa akukho nto konke konke, ayikabonakali, kodwa enye i-bigboss ukuba ...
Ngaba ucinga ukuba kunokwenzeka?
Ndiyabonga kakhulu kunye nokubulisa.
Elapsus 81 sitsho
Ngaba iyakuvumela ukuba uthumele kufacebook okanye uvule iapp? okanye ngaba lulwimi lweSpanish nje, ndiyathetha ukuba ikuvumela zonke iinketho eziyimfihlo kwi-ios 6?
URicardo T. sitsho
KODWA NJENGOKO NDIYITHENGA OKANYE I-IDEA ITHI NDIHLAWULILE PAL KODWA ANDINAWO UMNTU OYAZIYO XFA NDINCEDE, ENKOSI
Phendula uRicardo T.
UAbheli Sevillano Perez sitsho
Khangela i-repo ye-iphoneate kwaye unayo mahala
Phendula u-Abel Sevillano Perez
Naliphi ikhonkco lokubeka ummeli kunye nokufaka isatifikethi? Enkosi.
Lulwimi lwaseSpain kuphela, luvumela imisebenzi yesiqhelo ye-IOs 5 kodwa hayi ezo ze-IOs 6 njengokuvula, ukuthumela kufacebook ...
Ngaba kunokwenzeka kuthi kuthi abane-iPhone 4 enezibuko leSiri?
ilingana ncam no-siridr akukho tshintsho, inyani ayifanele.
Ndiphucula izikhumbuzo ngoku unokwenza izikhumbuzo xa ushiya indawo okanye kwangolo suku lunye
Mhlobo, i-siriDr ayibalulekanga kwaphela ... Ngoku unokusebenzisa iiseva iApple endaweni yazo "BETA" iseva esebenzisa iSiriDr
NdiseColombia kwaye uSiri wandisebenzela kakuhle ngolwimi lwesiNgesi, kodwa ngoku ndifumana ukuba uSiri akafumaneki okwangoku umyalezo ufika.Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kutheni?
Okokugqibela sele ndinayo i-iPhone 4s yam (isenayo i-5.0.1 eqhuba iLUXURY) igqityiwe ngayo YONKE imisebenzi endiyifunayo
ENKOSI IBigBoss !!! Enkosi namhlanje kwi-iPhone, ngokusigcina sinolwazi ngayo yonke into ... 🙂
Ndiyabulisa bantu !!!
Ayizizo zonke, ndiyithengile izolo kwaye imisebenzi yendawo ayisebenzi kum, ithi ziimephu kuphela kunye namashishini ase-US aya, ndithumele i-imeyile kumqambi wesicelo kwaye undixelela ukuba ngaphakathi uSiri ufumanisa ukuba yi-IOS 5 kwaye ke ayisiyiyo le misebenzi iya, ngalo mzuzu akaboni sisombululo.
Ngaba usebenzisa iinkonzo zendawo?
Kuyinyani, akukho khetho ye-geolocation, okanye umxholo wezemidlalo njengakwi-IOS6 ...
Ngokukodwa kwenzeka into efanayo nakum
Icacisiwe ngu drs23 kodwa jonga into ekujikelezeyo iqale iphone ndiyathemba izakulungiswa kungekudala
nyana kwaye wenze njani ndicela undincede enkosi
Kwaye le tweak inokusebenza kwi-iphone 4 ???? Sele ndihlaziye kwi-iOS 6 kwaye andazi ukuba kuyakufaneleka na ukwenza iDowngrade ukuba neSiri ngesiSpanish
Umphathi wobumnyama sitsho
UGonzalo le tweek ilingana ne-siriDr ?? yahluke njani?
Ewe ndicinga ukuba bayisusile kuba ayiveli kwi-cydia ...
Ngaba kunokwenzeka okanye ngaba ndenza into engalunganga ???
Ewe, ayibonakali kum kwaye ndinomthombo omkhulu we-bigboss kwaye ndaphinda ndalayisha kwakhona kodwa akukho nto konke konke. Kuba ???
Andilufumani ulwimi oluNcedisayo + kwi-cydia
UJulian Garcia Castillo sitsho
Ihamba ngokugqibeleleyo kwi-Iphone 4, iOS 5.1.1 !!
Ngoku kufuneka basebenze ngokudityaniswa kwendawo, ndivela eMalaga.
Phendula uJulián García Castillo
Yinkohliso ayisebenzi, ihlala isithi ifuna isiNgesi kuphela eMelika.
Ingxaki ikwinguqulelo, ukuze ubeko lwasekhaya kunye
ezinye iindaba ezinikezelwa yi-IOS 6 kufuneka sikhohlise i-iPhone yethu
oku kufuneka sitshintshe ingxelo ngesandla sisebenzisa iFayile.
Ukuqala, kuya kufuneka bakhuphele iFayile kwi-cydia, ngoku bakhuphele iFayile, bayivule kwaye xa sele bevula siye kwi-system / library / CoreServices / System version.plist. Siza kuvula le yokugqibela kunye nombukeli wombhalo.
Kuya kufuneka siguqule le migca ilandelayo:
Umzekelo kwimeko yokuba ne-IOS 5.1.1
Inguqulelo No. 9B206
Inguqulelo enguNombolo 10A403
Sinika ukuhlela kwaye siyichukumise inombolo kwaye sihlela iFirmware. Xa inyathelo lesi-3 lenziwe siyinika ukugcina kwi-bar ephezulu, kwaye ngoku Siphumile kwiFayile kwaye siqale kabusha i-iPhone. ziya kuseto> Ngokubanzi> Ulwazi
-Oku kwenza ukuba indawo kunye nezinye iinkonzo ezibonelelwa nguSiri
IOS 6 kodwa kukho ezinye ezingasebenzi ngokuchanekileyo kwaye ziqale kabusha ifayile ye-
Andinaxanduva lomonakalo onokubangelwa zii-iPhones.
URoberto Cibrian sitsho
Molo mhlobo wam, ndiyilandele imiyalelo yakho kwaye iyandisebenzela kokuncinci endikhe ndakusebenzisa, umbuzo nje omnye nceda, ndineSiriDr inyusiweyo, ndingayicima kwaye ayinampembelelo? Ndine-iOS 5.1.1 ene-JB.
Ngombulelo kunye nokubhekiselele
Phendula URoberto Cibrián
Ungayihoyi le tweat. Ifowuni iya kuqala kwakhona ukuba ubuza uSiri kwiikhemesti ezikufuphi okanye amanqaku ezemidlalo. Eyona nto imbi kukuba xa uhlengahlengiso lwenziwe ungabuyela umva, kodwa iVenkile yeApp iyasebenza.
Dsr23 Ngaba iVenkile ye-Apple iyakusebenzela?
Ndinengxaki yokungakwazi ukuthumela imiyalezo endiyifumanayo yokuba ndiphumile okanye ukuba akukho datha iselfowuni ngeli xesha, zama kwakhona kamva, nceda !!!! = [
Ndihlala ePuerto Ordaz, kwiLizwe laseBolivar, eVenezuela. Ndine-iPhone 4S ene-iO6 efakiweyo. Kuba xa ndixelela uSiri "Fumana iivenkile zokutyela", iyaphendula: "Uxolo, andifumananga zokutyela"
Hee molweni bafo ... Ingxaki ebendizama ukuyisombulula kodwa emva kwemizamo emininzi andikwazi ukuyifumana ndizoyishiya xa umntu endiphendula yindlela yokutshintsha amabinzana athi uSiri asele endinika wona soloko uthetha uhlobo olufanayo «Kulungile, kulungile hayi" Okanye kwiiqhulo "athi iphone kwi-ipad, kulungile, ndilibele" bendifuna angahlali esitsho izinto ezifanayo kwaye ndingayitshintsha njani kwiFayile? Ngaba yeyiphi incwadi eneenkcukacha?
Isifundo: Yehla kwi-iOS 6 ukuya kwi-iOS 5.1.1
Thelekisa ivolumu yesithethi kwiimodeli ezahlukeneyo ze-iPhone